1 year, 4 months ago 1770 Qoodi
Miseensonni mana maree Ameerikaa xalayaa ministeera Ameerikaatti barreessaniin mirga dhala namaa sarbuun faallaa dimookraasii ta’uu hubachiisanii tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatan.
Mootummaan Itoophiyaa paartiilee mormitoota wajjin marii akka jalqabu kan gaafatan miseensonni mana maree Ameerikaa filannoon biyyoolessaa yoom akka adeemsifamu walii galteerra akka gahamu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dhiibba akka godhu gaafatan.
Miseensonni mana maree Ameerikaa itti dabaluun - Fiannoo duraa mariin siyaasaa adeemsifamee walii galtee irra akka gahamu, intarneetiin akka hin cufamne, mirgi yaada ibsachuu Gaazexxeessitoota, dhaabbilee mormitootaa fi ummata biyyatti guutummaatti akka kabajamu hubachiisan.
Hidhamuun hooggantoota olaanoo paartii mormitoota kan akka Jawar Mohammed, motummaan Itoophiyaa fedhii biyya dimookraatessuu iraa gara boodatti deebi’aa jiraachuu mul’isa jedhan miseensonni mana maree Ameerikaa hubachiisan.
Labsii yeroo hatattama, haala sadarkaa adunyatiin wal madaaluun hojii irra akka oolu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibban taasifamuu qabas jedhan.
Manni murtii siyaasa irraa bilisaan ta’ee akka hojjatu, mirgi namummaa shakkamtootaa akka kabajamu Miseensonni mana maree Ameerikaa hubachisan.
Sarbamiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru qaama addunyaa kan walaba ta’een akka qoratamuuf dhiibban akka godhamu gaafatan.
Maddi: Oromo legacy leadership and advocacy association
MirgaNamoomaa Ameerikaa Itoophiyaa